Dreame L10 Pro vacuum Cleaner, analysis, performance and price | Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | 21/11/2021 16:00 | Ngwaọrụ ndị ọzọ, Nyocha
Oge a anyị na-abịa a obere nyochaa gburugburu akụkụ ndị a. Na Androidsis anyị na-ewetara gị nyocha na-adọrọ mmasị mgbe niile gbasara ngwaọrụ gam akporo. Mana anyị na-agwakwa gị ihe niile gbasara ngwa kachasị mma nke oge a, yana maka ngwa ndị na-emeju ekwentị anyị. Anyị enweela ike ịnwale ụbọchị ole na ole Dreame L10 Pro vacuum Cleaner.
Uno nke ngwa kachasị achọ nke oge ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ngwaọrụ maka ụlọ. Ị gaghị achọ akpaaka ụlọ iji rụọ ọrụ L10 Pro. smart, onye na-ehicha oghere nke kwụụrụ onwe ya ma nwee ike idebe ụlọ anyị ọcha n'enweghị mkpa ọ bụla maka mgbalị. Gịnị mezie anyị nwere ike ịchịkwa mgbe niile site n'enyemaka nke mobiles anyị.
1 Chekwa oge ma hichaa ụlọ gị mgbe ị na-anọghị
2 Na-ewepụ ihe mkpochapụ Dreame L10 Pro
3 Ọdịdị anụ ahụ na imewe nke Dreame L10 Pro
4 Kedu ka Dreame L10 Pro si arụ ọrụ ya?
5 Tebụl nkọwa nka Dreame L10 Pro
Chekwa oge ma hichaa ụlọ gị mgbe ị na-anọghị
Ikekwe, ịnwe ihe mkpocha ikuku naanị ịrụ ọrụ a ka a na-ewere dị ka nnukwu ọganihu. Mana ezigbo ọganihu nke ụdị ngwaọrụ ndị a na-enye bụ nke ahụ ha nwere ike ịrụ ọrụ ahụ unyi (nkwupụta okwu) ọbụna mgbe anyị na-anọghị n'ụlọ. Ekele diri smartphone anyị na ngwa nke anyị, anyị nwere ike ịchịkwa ihicha ụlọ site n’ebe ọ bụla anyị nọ.
Atụmatụ Dreame L10 Pro ọhụrụ ahịa mmepe nke mere na ojiji ya, na karịa ihe niile, nsonaazụ ọ na-enye, na-eju afọ. Ikike ichebe maka mmịpụta, ịchịkwa ihe mgbochi na-enweghị mkpa maka ujo, na a njikwa ziri ezi nke ọrụ a rụrụ nke a na-ahụ anya na anya gba ọtọ. Ugbu a ị nwere ike ịzụta Dreame L10 Pro na Amazon n'ọnụ ahịa kacha mma, yana kupọtụ mbelata ego DML10PBF nke euro 10.
Ịwepu ọkpọ ọkpọ Dreame L10 Pro
Metụ eme Ndepụta nke ihe anyị nwere ike ịhụ n'ime igbe L10 Pro. Na mgbakwunye na ihe nhicha ahụ n'onwe ya, anyị nwere Nchaji isi, nke anyị ga-ejikọta eriri ọkụ na ya. Anyị ga-emerịrị tinye ya n'ebe a na-enweta ohere dị mfe maka ikpochapụr. Ọ bụ ihe siri ike nke ọma n'elu ihe ọ bụla ma ọ dịghị ewere dị ka ụdị ndị ọzọ.
Anyị na-ahụkwa n'ime igbe ahụ ahịhịa n'akụkụ ka e wee sachaa akụkụ ọ bụla nke ụlọ ahụ. Nke tank maka ihe siri ike na tank maka mmiri mmiri, nke na-agbanwe agbanwe na enweghị ike itinye ya n'otu oge. N'ikpeazụ, kpochapu maka ihicha ala.
Ọdịdị anụ ahụ na imewe nke Dreame L10 Pro
Nhazi nke Dreame L10 Pro dabara n'ime, anyị ga-asị, 100% nke ihe anyị nwere ike ịtụ anya n'aka onye na-ehicha oghere robot. Ọ nwere ọdịdị anyị tụrụ anya na ọ ga-abụ ma na-arụ ọrụ anyị tụrụ anya ka ọ rụọ. Mana anyị ga-ekwu na ọ bụ nsonaazụ evolushọn dị mkpa na mmepe nke teknụzụ kachasị ọhụrụ.
Dị ka anyị nwere ike ịhụ, o nwere a ọdịdị ọdịdị, dị ka ihe nlereanya ọ bụla ọzọ na ahịa. N'ọnọdụ anyị, anyị natara ihe nlereanya nke kenkowaputa nwa agba, ọ bụ ezie na anyị nwekwara ike ịzụta Dreame L10 Pro na-acha ọcha. Emere ya rọba siri ike nke nwere akụkụ na-echebe ya na ihe rọba ka ọ ghara imebi arịa ụlọ.
Zụta Dreame L10 Pro gị ugbu a na Amazon wee tinye kupọtụ mbelata € 10 DML10PBF
N'elu anyị na-ahụ a modul oval ebe ihe mmetụta laser dị. Nke a, na ibiaghachi nke laser bụ nwee ike ịgụ ihe mgbochi na map mpaghara ebe ọ na-arụ ọrụ. Na nke a na-emi odude njikwa aka. Pịa bọtịnụ atọ dị ka bọtịnụ mgbanyụ / gbanyụọ. Bọtịnụ ụlọ, nke a ga-eji jiri aka ya ziga onye na-ehicha oghere na ọdụ chaja. Na bọtịnụ njikwa maka nhicha nke edekọgoro na nhazi usoro.
na n'ihu nke onye na-ehicha ihe, anyị na-ahụ ka Dreame L10 Pro nwere abụọ laser emitter nke a ga-eji chọpụta ihe na n'ihi ịdị nso ma ọ bụ profaịlụ dị ala adịghị achọpụta ihe mmetụta dị elu. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịzenarị "ihe mgbochi" nke ndị na-ehicha ihe ndị ọzọ na-enweghị ike ịchọpụta wee mechie ma ọ bụ na-adọkpụrụ.
Na okpuru anyị na-ahụ otú na wiil nke o nwere Dreame L10 Pro, na mgbakwunye na ibu karịa ka a tụrụ anya ya, nwere ogwe nke na-ebuli ihe nhicha ahụ kpamkpam iji zere ihe mgbochi ruo 20mm elu. Anyị na-ahụ mpaghara mmiri, akụkụ ebe ahịhịa n'akụkụ. Na ihe nlereanya a, akụkụ ebe anyị nwere ike ịwụnye tank maka mmiri mmiri ma ọ bụ ihe siri ike dị n'akụkụ elu, nke anyị ga-enweta site n'ibuli mkpuchi.
Kedu ka Dreame L10 Pro si arụ ọrụ ya?
Mgbe ịnwale ya ụbọchị ole na ole n'ụlọ, anyị nwere ike ikwenye na ọ na-arụ ọrụ ya nke ọma. Ebe ọ na-aga, nke bụ ala dum na-enweghị ngwá ụlọ dị n'ime ụlọ ahụ, ihe niile dị ọcha nke ọma. Ọ bụghị n'efu ka o nwere a suction ike 4.000 Pa, karịa ọbụna ụfọdụ USB agụụ Cleaners. Ọ bụrụ na ị chọrọ ike suction na ihicha irè, nweta Dreame L10 Pro na Amazon wee tinye coupon DML10PBF.
Su ụzọ, ozugbo achọpụtara elu na maapụ ya. O zuru ezu. Ọ na-abịaru nso na mgbidi ahụ nke mere na ọ dịghị ohere fọdụrụ unvacuted. Na ekele maka brush n'akụkụ ya, ọ dịghị speck nke uzuzu ma ọ bụ achịcha crumbs iguzogide. Laser gị na ọgụgụ ya nke "ihe mgbochi" na-eme ka ọ ghara ịkụ ya na ngwá ụlọ. Na ọ na-achịkwa isi n'okpuru oche, ma ọ bụ na tebụl, na-enweghị ọtụtụ nsogbu.
Nke mbụ ngafe nke Dreame L10 Pro dị ntakịrị nwayọ, yana oge ọ na-ewe abụghị nke a na-ahụkarị. Ihe mbụ ọ na-eme bụ mee map nke ụlọ ahụ. Kewaa ụlọ ahụ site na ọnụ ụlọ na A na-eme ihe owuwu nke mpaghara a ga-achọ site na mpaghara. N'ụzọ dị otú a, oge ọ bụla ị malitere n'oge na-esote, ị ga-eme otu ụzọ ahụ. NA ihicha ga-arụ ọrụ nke ọma na oge na oriri.
La ime mgbanwe onye na-ehicha oghere dị ịtụnanya n'ezie. Nyochaa ihe mgbochi ọhụrụ ọ bụla wee mee ụzọ ọhụrụ iji zere ya ma na-arụ ọrụ nke ọma dị ka o kwere mee. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ nwere ike iji ụzọ kacha nso dị nso iji rụọ ihicha kacha nke enwere ike tupu ịchọọ ụgwọ batrị.
La mop ọrụ na-arụ ọrụ na otu usoro dị ka ndị ọzọ ụdị. Malite na-awụsa mmiri mmiri n'ụzọ a na-achịkwa ruo mgbe mop nke ala na-agbanye, ma si otú a na-ehicha ala na ngafe ọ bụla. Iji mee ka ọrụ a rụọ ọrụ anyị ga-agbakwunye mmiri na ngwaahịa na tank y tinye mgbakwunye mop. N'iji ngwa a dị n'ebe, ị ga-arụ ọrụ agwakọta, buru ụzọ kpochaa ma mechaa na-ehichapụ otu ebe ahụ. Site na ọrụ mop, usoro ahụ yiri nnọọ, ma anyị agaghị etinye mmiri na tank.
Tebụl nkọwa nka Dreame L10 Pro
Nlereanya L10 Pro
Ụda 54 dB
Ike mmiri 4000 Pa
Batrị 5200 mAh
Onwe ya Ruo 150 nkeji
Oge nfe 3/4 ikp
Akụkụ X x 350 350 96 mm
Ike tankị ike 570 ml
Ike tank mmiri mmiri 270 ml
Ibu ibu 3.7 n'arọ
Ahịa 399.99 €
Linkzụta njikọ Dreame L10 Pro
Code Koodu ego 10 DML10PBF
Ịkwụ ụgwọ akwụkwọ ikike nkwado site na 19-11 ruo 29-11
Laser nkewa nnọọ kpomkwem.
Potencia ihe ruru 4000 Pa.
Na-asachapụ site ebe dị iche iche na ime ụlọ.
Nnwere onwe nke ruo nkeji iri abụọ ma ọ bụ 250 square mita.
Mkpọtụ nke na-ebupụta dị elu karịa ka a tụrụ anya ya, ihe a na-akọwa ya na ike ịṅụ mmiri.
Nchọpụta kapeeti ọ bụ nsogbu, ọ bụrụ na ọ dị oke oke, ọ na-aghọta ya dị ka ihe mgbochi ma zere ya.
Ihe na: November 21 nke 2021
Mgbanwe ikpeazụ: November 19 nke 2021
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Dreame L10 Pro vacuum Cleaner, nyocha, arụmọrụ na ọnụahịa